ဒုတိယအကြိမ်မြောက် နိုင်ငံတကာ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲ | Food Magazine Myanmar
ရန်ကုန်မြို့ Myanmar Event Park (MEP) မှာဇွန်လ ၃ ရက်နေ့မှ ၅ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံတကာ အစားအသောက်နှင့် အဖျော်ယမကာ၊ ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်း၊ အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများနှင့် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲ ကို ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကို All World Exhibition အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး အာရှဒေသတွင်း နိုင်ငံတကာအစားအသောက်နှင့်တည်ခင်းဧည့်ခံရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုပြပွဲများကိုဦးဆောင်ကျင်းပနေသော Bangkok Exhibition Services (BES) Ltd, မှ စီစဉ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြပွဲမှာလေ့လာနိုင်မှာကတော့
အမေရိကန်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဂျာမနီ၊ ကိုရီးယား၊ စင်္ကာပူ၊ တိုင်ပေ နှင့် ထိုင်း အပါအ၀င်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ မှ ပါဝင်ပြသသူကုမ္ဗဏီပေါင်း ၂၅၀ ကျော် တုို့မှ ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ကိုပြ သွားမှာဖြစ်တာကြောင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်များအပါအ၀င်၊ ဟိုတယ်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များမှ မန်နေဂျာများ၊ စားဖိုမှူးများ၊ စာဖိုဆောင်ဝန်ထမ်းများ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ကော်ဖီဆိုင်များမှ ပိုင်ရှင်များ၊ မန်နေဂျာများနှင့် ၀န်ထမ်းများ၊ မုန့်ဖုတ်လုပ်ငန်းများမှ ပိုင်ရှင်များ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ ဟိုတယ်နှင့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအတွက် ၀န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေသူများ၊ လက်လီအရောင်းသမားများနှင့် အစားအသောက်ဆိုင်ရာ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို လေ့လာလိုသော အများပြည်သူများလည်းလာရောက်လေ့လာ ကြည့်ရှုသင့်သောပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပြပွဲကို ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် ပြပွဲကျင်းပနေတဲ့ ဇွန် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြပွဲကျင်းပရာMyanamar Event Park (MEP) မှာ တိုက်ရိုက်စာရင်းပေး ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို၊ အွန်လိုင်းကနေလည်း ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် အွန်လိုင်းစာရင်းပေးသွင်းထားသူများအနေနဲ့ ပြပွဲသွားရောက်တဲ့နေ့မှာ အချိန်ကုန်သက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းစာရင်းပေးသွင်းနိုင်ရန်အတွက် www.foodandhotelmyanmar.com
Food and Hotel Myanmar 2015 မှာအစားအသောက်၊ အဖျော်ယမကာနဲ့တည်ခင်းဧည့်ခံမှုပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကဏ္ဍများနှင့်ပတ်သတ်သောပြိုင်ပွဲများမှာ
(၁) မြန်မာအချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာ ဖန်တီးမှုအနုပညာပြိုင်ပွဲ၂၀၁၅ (Myanmar Culinary Arts Competition (MCAC) 2015
ဂျွန် ၃ ရက်မှ ၅ အထိ ၃ ရက်ကြာ ကျင်းပမည့် မြန်မာအချက်အပြုတ်ဆိုင်ရာ ဖန်တီးမှုအနုပညာပြိုင်ပွဲ၂၀၁၅ Myanmar Culinary Arts Competition (MCAC) 2015 ကိုမြန်မာစားဖိုမှူးများအဖွဲ့ (MCA) နှင့် BES တို့မှ ပူးတွဲကျင်းပပေးပြီးစားဖိုမှူး (၂၀၀) တို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့် အတွေအကြုံများကို ယခင်မြန်မာနိုင်ငံတွင် မမြင်တွေ့ခဲ့ဖူးသော နိုင်ငံတကာအဆင့် စစ်ဆေးမှုဖြင့် နိုင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်စားဖိုမှူးများမှ ဒိုင်အဖြစ် ကြီးကြပ်ပြီးစစ်ဆေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) မြန်မာကော်ဖီနှင့်ယမကာ ကျွမ်းကျင်အဖျော်ပညာရှင်များပြိုင်ပွဲ ၂၀၁၅ (Myanmar National Barista Championship (MNBC) 2015)
ဒီပြိုင်ပွဲကိုတော့ ဇွန်လ ၃ ရက် နဲ့ ၄ ရက်နေ့များမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီး Element Coffee Consulting & Machine Supplies ကုမ္ဗဏီ နှင့် BES တုို့မှ ပူးတွဲစီစဉ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံး အဖျော်ပညာရှင်များနှင့် ကော်ဖီကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို တွေ့မြင်ပြီးသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များကိုလည်း လေ့လာခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရသည့် အစားအစာများဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲ (Safe Food for Hotels & Restaurants Seminers)
Food Science & Technology Association Myanmar မှတင်ဆက်မည့်ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီးဘေးကင်းစိတ်ချရသောအစားအစာများဆိုင်ရာပညာပေးရန်နှင့် ပညာရှင်များ ပိုမိုတိုးတက်စေရန် အလွန်အရေးကြီးသော အကြောင်းအရာဖြစ်သည့် ဟိုတယ်နှင့် စားသောက်ဆိုင်များအတွက် ဘေးကင်းစိတ်ချရသော အစားအစာနှင့် သန့်ရှင်းမှု စံနှုန်းများအကြောင်းကို ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့ ပြပွဲချိန်အတွင်းဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မေးမြန်းစုံစမ်းလိုပါက –
Bangkok Exhibition Services (BES)Ltd
Contact PR Executive : Ms. Wantita Porntanawong (Bow)
Tel : +662 615-1255 ext. 123
Contact : Htet Wai Zaw
Tel. : +95 1 513 515 – 519
Dates :3to5June 2015
Venue : Myanmar Event Park (MEP), Yangon
Facebook – Food & Hotel Myanmar
Sour Cream Blueberry Cupcake (ဒိန်ချဉ်ဘလူ�..